पत्रकारको “देश चलाउन दियो भने सक्छु जस्तो लाग्छ तपाइँलाई ?” भन्ने प्रश्नको जवाफमा कुलमानको यस्तो जवाफ (भिडियो सहित) – Ap Nepal
रामेछापको दुर्गममा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढेको एकजना सामान्य किसानको छोरो नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्र्याउने अभियन्ता कुलमान घिसिङ, विद्यालय पढ्दाको अनुभव यसरी स्मरण गर्छन्-
कुलमानको अध्ययन नै यसैमा छ कि विद्युतको मागको क्षेत्रबाट भार कसरी घटाउन सकिन्छ ? र समग्र एकीकृत लोडको ‘रिसोर्स प्लानिङ’ कसरी गर्ने ? कुलमानको अध्ययनमा आपूर्तिमात्रै होइन कि मागको पाटोले पनि पावर जेनेरेसन गर्छ । त्यस्तै ‘पिक लोड’ घटाउन सकियो भने त्यो नै ‘डिमाण्ड साइड’ हो ।उनी भन्छन्।
अहिले उनी प्राधिकरणबाट हटाइएका छन् उनको कार्यकाल पुरा भइसकेकोले उनी हटाइए तर पनि देश र जनताको निम्ती चान्स पाए जुनसुकै पदमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउन सक्ने हिम्मत गर्छन् उनी।
Prevभाईरल सचिन परियारका बाबा पनी दोहोरि गाउन ख,पिस् पर्यो भाइ,रल कल्पना दाहाल सँग ट, क्कर (भिडियो सहित)
Nextनिरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको मुल्य, आज तोलामा यति सस्तियो ..
आमाको माया ! मुखमा अक्सिजन लगाएर छोरा-छोरीको लागि खाना बना, उँदै महिला
अमृत सापकोटा र कमला घिमिरेको नयाँ गित “बʼनमा तरुल” सार्वजनिक (भिʼडियो सहित)